Shanda muPoland - Nyorera pano neCV yako uye utange Mabasa muPoland!
Shanda muPoland - Nyorera basa muEuropean Union
MaIndia eKuwait Mabasa
Mabasa muMalalaysia - Tanga nehurumende yehupfumi
Shanda muPoland - Tiri kuhaya iye zvino!
Shanda muPoland mumukuru wePoland, Warsaw. Kazhinji kutaura, kambani yedu yava kutohaya muEuropean Union. Tiri kuisa iye zvino expats ndiro guta riri pakati peWarsaw. Ikoko kune zvigadzirwa zvepamusoro, sechinhu chaicho, pane dzimwe nzvimbo itsva uye iyo vashandi vatsva inoda. Vanhu vechiPolish ndeimwe yepamusoro-soro maererano netsika. Makambani epasi pose, kune rumwe rutivi, akaisa hukuru hwepamusoro customer service jobs. Saka, Shanda muPoland yakamirira iwe. Ngatitarise nyaya yedu. Uye kushanda kwebasa muEuropean Union ane chibvumirano chebasa.
Nezvo izvi mupfungwa, European Union yakashandisa mari yakawanda paMamiriyoni emamiriyoni ezvepasi pano. Zvadaro makambani anobatsira kubva a vashandi vane unyanzvi. Zvakare, zvakapiwa zvino zvakawanda dzimwe nzvimbo dzebasa dzekutsvaga. Zvadaro kuderedza mari uye yebhizimisi-inoshamwaridzana mamiriro okunze uye kutanga kubhadhara vashandi vepasi rose. Pakati pemakambani makuru ekushanda muU.U. Muenzaniso wakanaka ndiAmerican guru guru rezvemari Goldman Sachs. Kazhinji kutaura, munhu wose anoziva chiratidzo ichi. Vari kuronga kuita kuwedzera basa rayo muPoland makore aya. Uye zvechokwadi zvichava zvakawanda International workses inoda.
Upload Resume Ku Dubai City Company ne 60 mazuva emabasa muPoland kuvimbisa. Kazhinji kutaura, iwe uchava kushanda zvikuru pamwe nevatori vedu. Titi yedu inokupa zvishandiso uye inokubatsira kuwana basa muEurope. Shandisa zvatiri Special Job Searching System By Kuisa Resume Yenyu kune kambani yedu. Iwe unogonazve kuedza chibereko zvachose RISK-FREE nokuda kwe60 mazuva !.
100% Basa rekuisa nzvimbo richaitwa rokupedzisira rokushanda muEurope. Uye kana iwe usingawani basa mu 60 Days !. Tinodzoka kwauri iwe paIndaneti kukubatsira kuwana basa mu Dubai. Kana iwe ukapfuura nepurogiramu uye usafunga kuti ndiyo inonyanya kukohwa mune basa rokutsvaga iwe wakamboita. Zvino unogona kuwana 100% Kudzosera pakarepo panzvimbo iyo, hapana mubvunzo wakabvunzwa. Saka zvakakurega iwe zvachose! Unogona Nyora yako shanduro.
Chivimbiso Chishanda muEurope / Poland !.
Tanga kushanda muPoland
100% Mutemo - Mabasa neEuropean Union!
Tanga Hupenyu Hutsva muPoland Tiri kupa zvizere relocation pepa kuPoland.
Shingaira Pedyo Nevatariri Vedu. Tende redu rinokupa mvumo yekushanda + vhiza + Imba.
Regai tiende kwamuri uye 100% Mutemo * Kushanda muEurope! Kuisa Resume Yako. Iwe unogona kuwana zvakawanda pamusoro pechigadzirwa zvachose RISK-FREE !.
100% Kudzorerwa kuchaitwa kana iwe usingawani Visa nebasa mu 30 kusvika 90 Days!
Uye kana iwe ukapfuura nepurogiramu uye usafunga kuti iri ndiyo inonyanya kukoshesa mari mubasa rokutsvaga iwe wakamboita. Ipapo iwe unogona kuwana 100% kudzorera pakarepo panzvimbo, hapana mubvunzo wakabvunzwa. Saka zvakakurega iwe zvachose! Kubhadhara basa muPoland.
Apa ndipo pane mabasa muPoland aripo!
Kambani yedu inopa mabasa muDubai nePoland. Saka, tinogona kukupa iwe basa muUber, McDonald's, Skanska, Hilton uye dzimwe nzvimbo dzakawanda zvinoshamisa. Kana iwe uri kutarisa kuti uwedzere pamwe nesangano renyika dzakawanda. Ichava a akachenjera zvikuru pfungwa yokuti ave nebasa idzva muEurope. Uye zvirokwazvo Poland ndiyo imwe yenzvimbo dzatiri kutsvaga kukuisa iwe. Zvese iwe zvaunofanirwa kuita kuve nekutarisa pazasi zvakawanda zvimwe zvidimbu zveruzivo.
Ndeapi mabasa emaPoland?
Pane mabasa mazhinji akanaka, somuenzaniso, Goldman Sachs, Uber, kunyange hoteli yeHilton iri kukwereta. Uye nezvozvi mupfungwa, Poland inotsvaka vashandi vatsva vane ruzivo. Zvisinei, kana iwe ukatarisa kukwanisa kwemusika unoshanda muPoland. Mazuva ese mabasa ari kuwedzera kune vanoenda kune dzimwe nyika. Uye dzimwe nzvimbo dzakawanda dzinosvika inowanika kune vashandi vemarudzi ose. Uyezve, ndicho chikonzero expats vave vakakwanisa kuwana mitsva muEurope. Kunyanya pamusoro pekupedzisira maguta makuru muPoland.
Ukuwo, paunoshanda muPoland unodzidza hunyanzvi hunoshamisa. Semuenzaniso Polish mutauro hunyanzvi hwakasimba. Saiwo hunyanzvi hwekuita zveumainjiniya hwakasimba. Iwe unogona kudzidza mune petrochemicals uye gasi uye Mabasa enhandare. Uyewo, pane dzakawanda zveimwe nzvimbo dzekutungamira dzekushanda muPoland. Semuenzaniso basa mumabhanki uye nzvimbo dzakasiyana siyana rutsigiro rwehurumende. Kune rumwe rutivi, unogona kuwana makambani akawanda ePoland kwose kwose pasi rose. Iko kune makambani e570,000 ePoland kumativi ose enyika. Saka, izvi zviri mupfungwa dzevanhu iye zvino, vachitsvaka basa ipapo. Kazhinji kutaura, Dubai City Company anofunga kuti tichava nezve 750,000 nekuguma kwegore re2025. "
Zviri nyore sei kuwana basa pano?
Yese yebhizimisi mamiriro ePoland akanaka. Nokuti mapurisa vanhu yakazarurirwa kune dzimwe nyika. Kazhinji, sezvo Poland yakabatana neEuropean Union-International bhizinesi yakabatana zvikuru kune vose vese muEurope. Kushanda muPoland nekambani yedu inogona kugoverwa pakarepo. Titi yedu inopa mabasa emabasa uye mvumo yebasa kune vatorwa. Tanga kushanda pakati peEurope. Isu tange tiri boka rakasimbiswa uye rakakurumbira muWarsaw. Kazhinji kutaura, nguva dzose kupa chirongwa chepamusoro iyo yakanakisa vatengi masevhisi. Uyewo kupa kupa kuchengetedza mabasa matsva muPoland. Uyezve, chinangwa chedu ndechekuita kuti kugara kwevatorwa muPoland, Warsaw, kunyanya, ndiyo nzvimbo yakanakisisa kune vaIndia vashandi uye vanotsanangura muPoland.
Dubai City company kubvira pakutanga inoshanda muEurope. Kutanga nehukama hukama hwakanaka ne hurumende yePoland. Uyewo pamwe chete zviremera uye nehurumende yemo yeWarsaw uye Wroclaw somuenzaniso. Asi nzvimbo yakanakisisa yekushanda muPoland ndiro guta reWarsaw. Zvechokwadi kubva pane a basa rekutsvaga chinangwa chekuona. Saka, izvi ndezvimwe vatsva vashandi vanotarisa paIndaneti Poland inobvumidza kushanda visa. Uye boka redu riri kupa izvozvo. Saka basa rinowanzoreva muPoland chinhu chakanaka kuita.
Uyezve, iri imwe ye idzo nzvimbo dzakanakisa dzekuita Bhizinesi rekunze. Uye nzvimbo iri nyore yekuenda kuEuropean Union. Uye kubva kumaguta makuru, iwe unogona kusvika kune dzimwe nzvimbo dzeEurope. Inokurumidza kupfuura mamwe maguta. Semuenzaniso muLondon, Putugaro uye Dublin. Uyewo, shandisa pamwe nevatora muPoland. Kuisa mikana vatorwa vanobva kunze kwenyika yose. Uye kazhinji kutaura vachitaurira ivo izvo zvinonzi Work Permit. Iyi gwaro inobvumira munhu mutsva kuti avhure kushanda visa uye kuti vauye kuPoland pabasa rekushanda.
Isu tinopa Visa uye Work permit muPoland
Ita kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekambani yedu. Uye kuti tinogona sei kukubatsira iwe kuti uve expat muPoland. Pasi, kune tsanangudzo yehutano hwekuita WP.
Nguva yekugamuchira Ikushandisa Permit inotora mavhiki 6-8.
Kazhinji kutaura, Chibvumirano Chebasa "purogiramu" ine zvinyorwa zve4.
Uye izvo zvinoda kuratidzwa kuAmbassy kana Ushumiri Wezvekune dzimwe nyika wePoland yevheji yekuzarura.
Apo mumwe munhu anogamuchira visa uye anouya kuPoland Dubai City Company yakagadzirira kuvapa vane zvakasiyana zvakasiyana-siyana zvevasati vadzidza mapuratifomu emabasa.
Isu tiri izvozvi chikamu cheBusiness International Group. Uye isu tiri kukura zuva rega rega kupa mabasa muPoland kune vatorwa.
Vhiki yoga yoga yedu vamiririri vanovandudza kubatana kwayo pamwe nemakambani akasiyana nemasangano muPoland.
Saka, tinogona kupa mabasa anoshamisa anopa kune vatorwa vokunze. Uye ivo vanozogara neboka redu nekuda kwe mikana yakanaka yebasa.
Unogona kuiswa mumabasa akawanda. Makambani akadaro seKebab King, Uber, Arche, Jober nevamwe vazhinji vachafara kuzarura mikova yavo kune vashandi vatsva vanobva kumativi ose enyika!.
Hazvina basa kutaura kuti hazvireve chero matambudziko kuti ave muridzi wePepa reVashandi. Semuyenzaniso, Poland inoshanda visa ichazoburitswa pasati pasvika 8 vhiki
Iwe unoda kuuya kuhofisi yedu uye yedu vakakwirira-vanokwanisa vamiririri ichakupa ruzivo rune ruzivo runotora munyaya yega yega nyaya.
Zvirokwazvo tisati taisa iwe unokwanisa kusaina chibvumirano chepamhepo neDubai City Company.
Tisati tava kuda kugovera Dubai City Company ne scan copies dzepasipoti yako yemakore ose uye chidzidzo chekudzidzisa uye CV.
Mhedziso yekushanda muPoland
Kana uri kutsvaga bhizimisi rakanaka International Group yokubhaja vatungamiri. Isu tiri iye ari kubhadhara. Nokuti hatina kumbobvumira kuhutano nehutano hwakapiwa kuvatengi vedu. Tinotenda kuchengetedza vatengi kufara uye vachivapa vane maitiro anobatsira zvikuru pamutengo wakakwana kwazvo.
Dubai City Company kambani ine vashandi vakanakisisa vachakutungamirirai pamwe chete nemafungiro avo ekugadzirisa matambudziko ako pachavo nekugara muchibata nguva dzose newe kana kambani yako. Our HR agents ichagara ichikuzivisa pamusoro pezvose zvinoshandiswa uye kushandiswa kwemabasa.
Kuti ubvise zvizere kushushikana kwese kwasara, iwe unowana pano muenzaniso weZvibvumirano zveMubatanidzwa pakati Bhizinesi International Group & Dubai City Kambani uye Vafambidzani.
Dubai City Kambani ikozvino ichipa magiraidhi akanaka Kwebasa muDubai. Boka redu rakafunga kuwedzera ruzivo rwemutauro wega wega wedu Dubai expats. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.